Shikhar Samachar | कोरोना जोखिम र प्रदेश सरकार कोरोना जोखिम र प्रदेश सरकार
कोरोना जोखिम र प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को उच्च जोखिममा रहेको छ । भारत संघ धेरै सिमानाका जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुर्वतयारी नअपनाउँदा उच्च जोखिममा परेको हो ।
पछिल्लो समय रोजगारीका लागि भारतमा रहेका हजारौं नेपालीहरु स्वदेश फर्केका छन् । सुदूरपश्चिमका नाकाहरुबाट कति जना नेपाल भित्रिय, को–भित्रिय, कहाँका भित्रिय सरकार संग कुनै तथ्याङ्ग छैन । विश्वको भाइरस संक्रमण प्रक्रिया हेर्दा मानिसको आवतजावत बाटै यो भाइरस फैलिएको देखिन्छ ।
चीनको वुहानवाट सुरु भएको कोरोनाको भाइरसको संक्रमण हावाको वेगमा फैलिएको छ । युरोप अमेरिका समेतलाई तहस नहस छ । कोरोनाले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु पाकिस्तान, श्रीलंका, वंगलादेश र भारतमा समेत व्यापकरुप लिइसकेको छ । यस क्रममा नेपाललाई धेरै पाटोबाट उच्च जोखिम रहेको छ । भारत र चीनका खुल्ला सिमाना रहेका कारण हजारौं मान्छेहरु नेपाल प्रवेश गरेका छन् । २५ जना भन्दा वढि भिडभाड नगर्न निर्देशन जारी गरेको नेपाल सरकारले २५ हजार मान्छे खचाखच लाइन लागेर नेपाल छिर्दा मुकदर्शक भएर हेरिरहेछ । गड्डा चौकी नाका, गौरिफण्टा नाका, झुलाघाट नाका, धार्चुला नाका, वीरगंज नाका, रुपैडिया नाका जोगमनी, वेलहिया नाकावाट हजारौंको संख्यामा नेपाली, भारतीय र चाइनिजहरु नेपाल छिरेका छन् ।
खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिदै गर्दा त्यसको असरले अधिकांश नेपालीहरु काम बिहिन भएर नेपाल फर्किएका छन् भने केही कोरोनाको डरले नेपाल भित्रिएकाछन् । आपतकालीन अवस्थामा मात्रै एक्कासी मुलुक लकडाउनमा जादा प्रवासी नेपालीहरु झन् समस्यामा परेकाछन् । नाकाहरुमा प्रहरी र नेपाल भित्रिने नेपालीहरु विच झडप नै भएको छ । सरकारले सीमा नाका सिल गर्न ढिलाई गरेको छ । भारतमा फैलिएको कोरोना केही दिनमा सुदूरपश्चिममा पनि देखिने आलंकन गर्न सकिन्छ । कोरोनाको संक्रमण तत्काल नदेखिने भएकाले अहिले अवस्था सामान्य नै छ । वेला घर्कि सकेपछि मात्र आँखा खुलाउने नेपाल सरकारको पुरानो शैलीमा केहि अन्तर र परिवर्तन आएको छैन । प्रदेश सरकार पनि केन्द्रकै मुख ताखिरहेको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार संक्रमण रोकथामका मामिलामा चुकेको छ । प्रदेश सरकार संग निर्णय लिने थुप्रै अधिकार भएपनि केन्द्रकै निर्णयमा निर्भर छ । प्रदेश बासीको स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्बन्धमा समेत प्रदेश सरकारको आत्मानिर्भरता देखिएन । खुल्ला नाकावाट नेपाल हिडेकाहरुको अवस्था के छ ? तथ्याङ्क के छ भन्ने वारेमा समेत प्रदेश राज्य र प्रशासन उदासिन रहेको छ । भारतबाट आएका नेपालीहरुलाई अनिवार्य १४ दिनको क्वारेनटाइनमा राख्ने र निगरानी गर्ने व्यवस्था पहिलै मिलाउँनु पर्ने थियो तर त्यो सकेन । हेल्थ डेस्क हात्तीको देखाउने दाँतमात्र भएको देख्न सकिन्छ तापक्रम नापेर खुल्ला प्रवेश अनुमती दिने राज्यको निकायले कोरोना संक्रमणको गंभिर्यतालाई मूल्यांकन गर्न सकेको छैन यो राज्यको निकम्वा पन सिवाय केहि हुन सक्दैन ।
अबको अवस्थामा सरकारले लकडाउन बाहेक स्वास्थ्य उपचार तथा प्रदेशमै ल्याव टेस्टहुने व्यवस्था मिलाउँन जरुरी देखिन्छ । तर सरकार लकडाउनमा नै व्यस्त छ । अबको अवस्था भनेको संक्रमण देखिएका व्यक्तिको उपचार र व्यवस्थापनका लागि जुट्नु पर्ने अवस्था हो । अबको कठिन अवस्थामा सरकार भित्र लुकेर बस्ने अवस्था होईन । आउँन सक्ने सम्भावित उच्च जोखिम संग लड्का लागि तयार हुँने र तयार गर्ने अवस्था हो ।
अहिले सम्म सरकारले भरपर्दो चेकजाँच तथा बाह्यमुलुकबाट आउँने नागरिकका लागि सुरक्षित निगरानिमा राख्न सक्ने क्षमता पनि राख्न सकेको छैन । सुदरपश्चिमबासि अवको अवस्थाबारे त्रसित छन् । विश्व नै त्रसित र आतंकित भएको समयमा प्रदेश सरकारका गतिबिधि सुन्य जस्तै छन् । सबै भन्दा त्रसित त स्वास्थ्यकर्मीहरु नै छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरु आफु सुरक्षित भएर बिरामिको स्वास्थ्य सेवामा लाग्न सक्ने अवस्था छैन । स्वास्थ संस्थाहरु संग सामान्य थर्मो गन समेत उपलब्ध छैन । स्वास्थ्य कर्मीको लागि सुरक्षीत पोषक, मास्क सेनेटाइजर, ग्लोब्स , चस्मा र औषधि समेत अभाब छ ।
रोग लागि हालेमा उपचारमा खटिने डाक्टरलाई दिइने सुरक्षा कवज पिपिइ सेट र सुरक्षित मास्क समेत उपलव्ध गराइएको छैन । वरिष्ठ चिकित्सकहरु आफ्नो जीवन दाउमा राखेर उपचार गर्न नसकिने घोषणा गर्न थालेका छन् । कठिन अवस्थाबाट मुलुक संगै प्रदेश गुज्री रहेको बेला सरकार सुस्ताउँन मिल्दैन । रोग बिरुद्ध लड्का लागि संघ संस्था , ब्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी , मिडियाकर्मी स्वास्थ्य कार्यालय तैनात छौं स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गरा भनिरहँदा सरकारले बजारमै अभाव छ । पाइरा छैन । प्रयासमा छौं भनेर पञ्छिन मिल्दैन । केन्द्र सरकार टाढा छ नजर कम पुग्न सक्छ तर प्रदेश र स्थानिय सरकार आँखै अगाडीको बिकराल संकट चियायर हेर्न मिल्दैन । जसरी देश र जनाताका लागि आफु समर्पित हुन्छौं भनेर पदमा बस्नु भएको हो त्यसरी नै संकटबाट जनतालाई जोगाउनुस् ।
भारत लगायतका अन्य मुलुकको कठिन परिस्थिति, बाध्यताले संकटको घडिमा नेपाल फर्किएका नेपाललिहरुमा मेरो उच्च सम्मान छ । संकटमा मान्छेले आफ्नो माटो, आफ्नो मुलुक, आफन्त र परिवारलाई सम्झिनु र स्वदेश फर्किनु स्वभाविकै हो । सरकारले पनि मानविय संवेदनाको ख्याल गर्न सक्नु पर्दछ । भरकरै नेपा भित्रियका नेपालिहरुमा मेरो अनुरोध छ तपाइ स्वच्छ हुनुहोला, तपाइलाई केही नभएको होला र केही नहोस् कामना पनि छ । तर तपाई भिडभाड र संक्रमित मुलुकको यात्रा तय गर्दै आउँनुभएको छ । तपाइ संग भाइरस आएको हुनसक्छ । तत्काल नदेखी पनि केही समय पछि देखिन सक्छ यसलाई मध्य नजगर गर्दै तपाइलाई सरकारले व्यवस्थीत गरेर स्वदेशमा क्वारेन्टाइन राख्न नसके पनि तपाई आफ्नो, परिवारको , आमाबुवा , बालबच्चा र छिमेकीको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै घरको एउटा कोठामा दुइहप्ता जति होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुस् । यो भाइरस उपचार पछि पनि निको हुन्छ । आफुमा समस्या देखीए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य जानुस् । मुलुक लकडाउानमा रहेकाले अन्य मुलुकबाट सिमानाका तिर आयर दुख पाउँनु भन्दा बिदेशमा रहेका नेपाली सुरक्षीत एक ठाउँमा बस्नुस् । नेपालि राजतु लगायत नेपालमा सम्पर्क हुने ब्यक्ति संग आफु बसेको मुलुक र ठाउँका बारेमा जानकारी दिनुस् । आबस्यक परे सरकारले उद्धार समेत गर्न सक्छ ।
पहाडी जिल्लाहरु उच्च जोखिममा
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको छ । पहाडका धेरै जनता मजदुरी गर्न भारतका बिभिन्न ठाउँमा जाने गर्दछन् । अहिलेको समयमा भारतले गरेको लकडाउनले गर्दा भारतमा कार्यर नेपालिहरुलाई कामबाट निकालिएको छ । परदेशमा काम बिना बस्न नसक्ने स्थिति आएपछि दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ ।
भाइरसले पहाडको गरिवि तथा बिकटताको मौका छोपेर आफ्नो संक्रमण बढाउँने देखिन्छ । पहाडमा जनचेतना देख जनशक्ति, औषधि, खाध्यान्नको समेत अभाव हुने देखिन्छ । पहाडमा भारतबाट भित्रिएकाहरुको निगरानी अझै गर्न सकिएको छैन । स्थानिय सरकारले सामान्य स्वास्थय जाँच र तथ्याङ्ग राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । भरकरै नेपाल भित्रिका ब्यक्तिमा तत्काल असर नदेखिन सक्छ । तत्काल कुनै असर नदेखिएको भन्दै ति व्यक्तिहरु परिवार समाज संग निर्धक्क घुलमिल भैरहेकाछन् ।
कामना छ त्यस्तो परिस्थिति नआवस् । तर आइहाल्यो भने हामी संग के तयारी छ । कसरी नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । सरकारको भुमिका अहिले सम्मको के छ ? पहाडी जिल्लाहरुका स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानिय तहले हेल्थ डेस्क स्थापना गरेका छन् परामर्श दिदै आएका छन् । दुइ तिन ठाउँ बाहेक अन्यत्र थर्मोमिटरले चेक जाँच हुन्छ । थर्मोगन, स्प्रे, सुरक्षित लुगा, ग्लोब्स मास्को अझै चरम अभाव छ ।
पहाडी जिल्लामा यस्तो जोखिम छ तर सरकार अझै सहर केन्द्रित छ । सहरका जनता मात्रै जनता होइनन् । सरकारमा भएका मान्छेमात्रै यस देशका नागरिक होइनन् । मुलुका सबै नागरिकले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपती लगायतका उच्चपदस्त सरिको स्वास्थ्य सेवा लिन पाउँने अधिकार छ । सहर खाली हुँदैछन् । गाउँ भरिदैछन् । पहाडका गाउँहरुमा अहिले बाक्लो उपस्थिति छ । जहाँ न प्रशासन पुग्न सक्छ न त सरकार ।
सरकारले पहाडका जिल्लाहरुलाई केन्द्रित गरेर आउन सक्ने संकट मेटाउँन पहाडमा बढी स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्न जरुरी छ । एम्बुलेन्सको अभाव हुन सक्छ । सरकारी गाडीहरु समेत बिरामी वसारपसारका लागि प्रयोग हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्यलाई मध्यनगर गर्दै सरकार संग भएका सबै जनशक्ति, स्रोत साधनको प्रगरी गरि उचित सदुपयोग हुन जरुरी छ ।
असावधानिका कारण जनताले ठूलो क्षति वेहोर्नु प¥यो भने त्यसको परिणाम र जिम्मेवारी राज्यको हुनेछ । यो कहर जहर वन्न नपरोस् सरकार जनताप्रति वेला छदै उत्तरदायी र उचित कदम उठाओस् ।